Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Ny fanjakana India izao dia mifantoka amin'ny fizahan-tany maharitra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Fizahan-tany maharitra Odisha
Nikarakara fizahan-tany “fizahan-tany ho an'ny fitomboana - Fandinihana & Fomba Mandroso” ny fitsidihan'ny Odisha omaly niaraka tamin'ny FICCI, ao anatin'ny fankalazana ny Andro fizahan-tany eran-tany 2021.
Ny hafatra avy amin'ny praiminisitra Odisha dia nanasongadina ny filàna fizahan-tany tarihan'ny fiarahamonina.
Odisha dia manolotra tahiry fitsangatsanganana traikefa fizahan-tany tsy voatanisa.
Raha mbola mitohy ny ady amin'ny areti-mandringana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany, ny fizahantany Odisha dia miroso haingana amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany an'ny fanjakana izay maharitra sy manohana ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena.
Ny Lehiben'ny Minisitra Atoa Naveen Patnaik, Governemantan'i Odisha, dia nandefa hafatra manasongadina ny filàna fizahan-tany fizahan-tany maharitra, tompon'andraikitra ary tarihan'ny fiarahamonina. Ny hafatra dia novakian'Andriamatoa Sachin Ramchandra Jadhav, Talen'ny & Addl. Sekretera, Departemantan'ny fizahantany, governemanta Odisha.
Hoy izy: “Odisha manolotra tahiry tsy voatanisa niainana niainana fizahan-tany. Na eo aza ny fanamby ateraky ny areti-mifindra, dia hitanay ny tanjaka sy ny faharetana nasehon'ireo mpiaramiasa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny amin'ny famoronana rivo-piainana azo antoka, azo antoka ary manankarena ho an'ireo mpandeha hitety an'i Odisha - Ny tsiambaratelo tsara indrindra ho an'ny India.
“Ny lohahevitry ny Andro fizahan-tany eran-tany 2021 dia ny fizahan-tany ho an'ny fitomboana. Rehefa manohy ny ady amin'ny areti-mandringana ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ny fizahantany Odisha dia miroso haingana amin'ny fampandrosoana mirindra ny sehatry ny fizahan-tany an'ny fanjakana izay maharitra maharitra sy manohana ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena. Ny fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra dia mampiditra an'i Odisha.
“Ny fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra dia mampiditra an'i Odisha. Ny tolotra lehibe ataontsika dia mifantoka amin'ny fiarahamonina. Ny fandraisana an-tanana ny fizahan-tany ho an'ny ekôstourista Odisha an'ny tobin'ny natiora tantanin'ny vondrom-piarahamonina dia maneho an'io maodely io amin'ny taratasy sy fanahy. Nampahafantarinay ihany koa ny Scheme Fampiorenana ny Odisha Homestay 2021 hahafahana mamorona traikefa fizahan-tany lalina amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny tokantrano amin'ny toerana maro karazana bio misy kolontsaina manankarena sady mampiroborobo ny fandraharahana eo an-toerana ary mampitombo ny fivelomana any ambanivohitra.
"Amin'ny ezaka ataonay hametrahana an'i Odisha ho ivon-toerana fizahan-tany misy fenitra manerantany, dia miasa am-pahavitrihana amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa izahay amin'ny alàlan'ny fandrafetana drafitra maoderina ho an'ireo tanjona laharam-pahamehana manerana ny fanjakana miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina sy ny fampidirana ireo orinasa manome lanja maharitra toy ny asa-tanana sy ny fampiroboroboana ny Sakafo Odia tena izy. ”
Andriamatoa Jyoti Prakash Panigrahi, minisitry ny fizahan-tany, Odia fiteny, literatiora & kolontsaina, governemanta Odisha, dia nilaza fa i Odisha dia nanamboatra ny paikady sy ny fahitana ho an'ny fizahan-tany ao amin'ny tontolon'ny COVID taorian'ny fiantohana fa ny fiarovana no laharam-pahamehana.
Nasongadin'Andriamatoa Panigrahi ny mety ho fizahan-tany goavana any amin'ny fanjakana: "Manana tontolo miavaka sy kolontsaina ary lova mandova any amin'ny fanjakan'i Odisha izahay. Araka ny voalazan'ny Lehiben'ny Minisitra Hon'ble, ny governemanta dia manolo-tena hikarakara ny tontolo iainana amin'ny maodely tarihin'ny fiarahamonina izay maharitra ihany koa. Nahazo ny loka Silver ho an'ny "The Future Future Forward State" ihany koa ny fanjakana tamin'ny loka faha-6 an'ny India Responsible Tourism. Odisha dia mpitarika amin'ny fizahan-tany sy fanatanjahantena. Ny fanjakana koa dia mitarika sehatra maro hafa toy ny fanamafisana ny vehivavy izay nanahaka ny fanjakana hafa. ”
Ankoatr'izay, nanamafy ihany koa ny minisitra momba ny fizahan-tany Caravan, politikam-panjakan'ny India, ary nilaza fa ny fanjakana dia mandray ny fepetra rehetra manomboka amin'ny famoronana fotodrafitrasa fototra takiana amin'ny Caravan fizahan-tany ka hatramin'ny vokatra farany hahazoana antoka fa vita sy hampiharina tsy ho ela.